Magic Microfiber Quick Dry Hair Towel - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်မရှိပါ WoopShop®
Magic Microfiber အမြန်ခြောက်သွေ့သောဆံပင်သုတ်ပုဝါ
$9.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $14.99
အရွယ် 60x25cm 60x20cm
အရောင် စိမ်းလန်းသော အဖြူ ပန်းရောင် နှင်းဆီနီ လိမ္မော်သီး ပြာသော ကော်ဖီ ခရမ်းရောင်နု ရေတပ်အပြာ
60x25cm / အစိမ်းရောင် 60x25cm / White 60x20cm / ပန်းရောင် 60x25cm / ပန်းရောင် 60x25cm / နှင်းဆီပန်း 60x20cm / နှင်းဆီပန်း 60x20cm / လိမ္မော်ရောင် 60x25cm / လိမ္မော်ရောင် 60x20cm / အပြာရောင် 60x25cm / အပြာရောင် 60x25cm / ကော်ဖီ 60x20cm / ခရမ်းရောင် 60x20cm / ရေတပ်အပြာရောင် 60x20cm / ကော်ဖီ 60x25cm / ခရမ်းရောင် 60x25cm / ရေတပ်အပြာရောင် 60x20cm / အစိမ်းရောင် 60x20cm / White
Magic Microfiber Quick Dry Hair Towel - 60x25cm / အစိမ်းရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
feature ကို: စက်ခံနိုင်သောပစ္စည်း အမြန်ခြောက်သွေ့သောcompressed
သက်ဆိုင်သောလူများ - အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများ၊ ဆယ်ကျော်သက်များ
အလေးချိန် - 3.40 အောင်စ (96.38g)
Secure Button: ဟုတ်ကဲ့
အ ၀ တ်လျှော်ဖျား - အညစ်အကြေးမရှိ၊
Microfiber အထည်များသည်သဘာဝအမျှင်များဖြစ်ပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲအသားအရေနှင့်ထိတွေ့ခြင်း၊ အသားအရေကောင်းမွန်ခြင်း
အရွယ်အစား - 60x20cm / 60x25cm
စိုစွတ်သောရေစုပ်ယူနိုင်ခြင်း၊ မြန်ဆန်သောခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အချိန်ကုန်သက်သာခြင်း၊ သင်၏ဆံပင်ကိုခြောက်သွေ့ခြင်း 100% natural Quick Quick Hair Hair Dry Hat! လျှပ်စစ်ဆံပင်လေမှုတ်စက်မရှိတော့ပါ! အုပ်စုခွဲကြီးစွန်းများ၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချပေးသည်။
ခလုတ်ကိုစွဲစေခြင်းနှင့်အတူ Ultra- ဒဏ်ငွေပေါင်းစပ်ဖိုင်ဘာပစ္စည်း။ သင်ရေချိုးသည့်အခါသင်၏ဆံပင်ကမချော်ပါ။ အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်!
Quick Magic Dry Hair Cap သည်အိမ်တွင်၊ အားကစားရုံနှင့်သွားလာရင်းတွင်နေ့စဉ်အသုံးပြုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏မျက်နှာကိုရေချိုးခြင်း၊ မိတ်ကပ်နှင့်အဝတ်လျှော်ခြင်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်သည်။ ဆံပင်အမျိုးအစားနှင့်အရှည်အားလုံးအတွက်သင့်တော်သည်။
သင်၏လှပသောဆံပင်ကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေသည့် Blower ကိုအသုံးပြုပါ။ ခြောက်သွေ့သော ဦး ထုပ်သည်ဆံပင်မှအစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူသည်။ ၎င်းသည်ဆံပင်ရှည်ခြောက်သွေ့မှုအရှိဆုံးနှင့်အဖျက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဆံပင်လေမှုတ်စက်အသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ဆံပင်ကိုများစွာပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ဤခြောက်သွေ့သောဆံပင်အဖုံးသည်ငါးမိနစ်အတွင်းသင်၏ဆံပင်ကိုခြောက်သွေ့စေသည်။ ၅ မိနစ်ပဲလိုတယ် ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်းလာစမ်းပါ။
သင်၏ဆံပင်ကိုဆွဲချွတ်နိုင်အောင် ဦး ခေါင်းထိပ်တွင်ဆံပင်သုတ်ပုဝါပေါ်တွင်တင်ပါ (ခလုတ်ဖြင့်အဆုံး)
သင်၏ ဦး ခေါင်းကို ဖြတ်၍ လုံခြုံသောကွင်းဆက်ကိုဖွင့်ပြီး၎င်းကိုလုံခြုံသောခလုတ်အောက်တွင်ဖြေရှင်းပါ။
မွတ္စု: ပစ္စည်း၏အမှန်တကယ်အရောင်သည်သင်၏မော်နီတာ၏အလင်းနှင့်အလင်းတောက်ပမှုစသောအချက်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောရုပ်ပုံများနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားနိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးတိုင်းတာမှုအတွက်အနည်းငယ်သွေဖည်ပါ။
က c très joli
всеотлично။3нед။ качествохорошее။
ဤအရာသည် Synthetik noch nicht probiert ဖြစ်သည်
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဝယ်ပြီးတစ်ယောက်ကိုလက်ဆောင်တစ်ခုအနေနဲ့ဝယ်ခဲ့တယ်။ ၎င်းကိုအကြိမ်အနည်းငယ်သာအသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ဆံပင်သည်ပုံမှန်ထက်အနည်းငယ်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာခြောက်သွေ့နေပုံရသည်။ ၎င်းသည်အနည်းငယ်ကြီးသည်ဟုခံစားရသော်လည်းဆံပင်ရှည်သူများအတွက်မူယင်းသည်ကောင်းသည်။ ထုတ်ကုန်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့အလွန်လျင်မြန်စွာရောက်ရှိလာခဲ့သည်။